ဂျာမနီ၌ပညာသင်ဆုအပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့ထားသော 2021 လျှောက်လွှာပုံစံ Portal - လက်ရှိကျောင်းသတင်း
ဂျာမနီတွင်ပညာသင်ကြားရန်အပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့ထားသောပညာသင်ဆု - ဂျာမနီတွင်ပညာရေးကိုလွယ်ကူစေသည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖြစ်စေကြောင်းပညာသင်ဆုရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီပညာသင်ဆုအချို့အံ့သြဖွယ် packages များနှင့်အတူလာကြ၏။
သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်ဤအရာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါက ပညာသင်ဆုဤဆောင်းပါးပါသတင်းအချက်အလက်များကိုဂရုပြုပါ။ ဤဆောင်းပါး၌ဤပညာသင်ဆုအတွက်မည်သည့်နေရာတွင်လျှောက်ထားရမည်ကိုလေ့လာရမည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဂျာမနီ၌အံ့အားသင့်ဖွယ်လေ့လာမှုအပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့ထားသည်
1 ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ DAAD ပညာသင်ဆုများ
ဤသည်အပြည့်အဝရန်ပုံငွေဂျာမနီမှာလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည် ပညာတတ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်မဟာဘွဲ့နှင့်ပါရဂူဘွဲ့နှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းကိုဂျာမန်ပညာရေးဆိုင်ရာလဲလှယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု (DAAD) ကထောက်ပံ့ပေးသည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှရရှိသောနိုင်ငံခြားဘွဲ့ရများနှင့်စက်မှုနိုင်ငံအသစ်များအတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးသည်။ ဒါ့အပြင်သူကစည်းကမ်းအားလုံးဖုံးလွှမ်းနေသည်။ ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုကူညီတယ် ဘွဲ့ရ တစ် ဦး ဘွဲ့လွန်ယူသို့မဟုတ် မဟာဘွဲ့ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ် - အသိအမှတ်ပြုမှာ ဂျာမန်တက္ကသိုလ်.
ဒါ့အပြင်ခြွင်းချက်ကိစ္စများတွင်သူတို့ကိုတစ် ဦး ယူရန်ကူညီပေးသည် ပါရဂူဘွဲ့။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်တက္ကသိုလ်အဆင့် (Master's / PhD) ရရှိရန်။ သို့သော်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှလူငယ်ပညာရှင်များကိုရည်ရွယ်သည်။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: အဆိုပါပညာသင်ဆုတွင်ဘွဲ့ရသူများအတွက်လစဉ်ယူရို ၈၅၀ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်ပါရဂူကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ယူရို 850 ။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူသည်အများပြည်သူအာဏာပိုင်သို့မဟုတ်အစိုးရသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဘွဲ့တစ်ခုရထားရမည်။ ပြီးတော့ပျှမ်းမျှရလဒ်တွေထက်အများကြီးပိုတဲ့ပညာရေးဒီဂရီကိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်။ ထို့အပြင်သူ / သူမ၏ပညာသင်ဆုဘွဲ့6နှစ်ကျော်မဖြစ်သင့်သည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: သြဂုတ်လ - အောက်တိုဘာလ, 2021 ။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ KAAD ပညာသင်ဆု
KAAD ပညာသင်ဆုသည်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပညာရှင်များမှပါပဲ။ ဂျာမနီမှာဘွဲ့လွန်လေ့လာမှုကိုစိတ်ဝင်စားသူများ။
ထို့အပြင်၊ ဤပညာသင်ဆုသည်အာဖရိကရှိရွေးချယ်ထားသည့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှနိုင်ငံသားများကိုသာရည်ရွယ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဒါ့အပြင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်လက်တင်အမေရိကရှိနိုင်ငံများ။ သို့သော်ကက်သလစ်လျှောက်ထားသူများအတွက် ပို၍ နှစ်သက်သည်။ သို့သော်အသေးစိတ်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link သို့သွားနိုင်သည်။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: မဖော်ပြထားပါ သို့သော်အသေးစိတ်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link ကိုသင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
လိုအပ်ချက်: မဟာပညာသင်ဆုလျှောက်ထားသူများသည်အသက် ၃၀ ပြည့်သင့်ပြီး PhD ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားသူများသည်အသက် ၃၅ နှစ်ထက်မကြီးသူများဖြစ်သင့်သည်။ လျှောက်ထားသူသည်အာဖရိက၊ အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်လက်တင်အမေရိကရှိဖွံ့ဖြိုးဆဲသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမှဖြစ်ရမည်။ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့တစ်ခုရထားရမယ်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်:နှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်၊ ဇွန် ၃၀ ။
3. Finduddannelse.dk ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောပညာသင်ဆု
ဤသည် Finduddannelse DK ထောက်ပံ့ပေးပညာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီအပြည့်အဝငွေကြေးထောက်ပံ့ပညာသင်ဆုဂျာမနီမှာလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ finduddannelse.dk တွင်ယနေ့ကျောင်းသားများသည်သုတေသနနှင့်အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်များမှတစ်ဆင့်မနက်ဖြန်ကမ္ဘာကိုအပြုသဘောဆောင်သောပုံစံဖြင့်ပုံသွင်းနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ထို့ကြောင့်ယူရို ၅၀၀၀ အထိပညာသင်ဆုကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ပြီးတော့ကျူရှင်စရိတ်တွေကိုကူညီပေးပြီးကျောင်းသားကကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲနေတဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်နိုင်အောင်ကူညီပေးတာပါ။
ထို့အပြင်ပညာသင်ဆုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ဆောင်း ဦး ရာသီ / ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ သခင်၏အစီအစဉ်ကို ၎င်းသည်ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုရေရှည်တည်တံ့စေရန်ကူညီပေးသည်။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: € 5000 ။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူသည်မာစတာ၏အစီအစဉ်ကိုလျှောက်ထားရမည် (သို့မဟုတ်လျှောက်ထားမည်) သူသည်သူမအားကမ္ဘာကိုပိုမိုရေရှည်တည်တံ့စေရန်ကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကျဆုံးသောစာသင်ချိန် မှစတင်၍ လေ့လာရန်အတွက်လျှောက်ထားခြင်း (လျှောက်ထားခြင်း) သည်မှန်ကန်သောဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ကိုရရှိထားရမည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 12 ဧပြီလ 2021 ။
၄။ IELTS စာမေးပွဲကြေးစွန့်လွှတ်သောပညာသင်ဆု
IELTS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည်ပညာရပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နောက်ထပ်တံခါးများဖွင့်ရန်အလားအလာရှိသည်။ ဒါ့အပြင်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းဆီသို့ ဦး တည်။
ထို့အပြင်ခန့်မှန်းချက်အရနှစ်စဉ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၀ မှ IELTS စာမေးပွဲတွင်ကျောင်းသား ၅ သန်းခန့်ရှိသည်။
ဒီ IELTS စာမေးပွဲကိုအဆင့်အတန်းကောင်းကောင်းတက်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်။ သို့သော်လည်းငွေကြေးအကျပ်အတည်းများကြောင့် IELTS စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် IELTS Test ကြေးကိုထောက်ပံ့သောကြောင့်ဤပညာသင်ဆုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူသည်အသက် ၃၂ ​​နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ ထို့အပြင် High School တွင်အနည်းဆုံး ၇၅% အမှတ်များဖြင့်ရှင်းလင်းထားရမည်။ ထို့အပြင်အနည်းဆုံး 32 GPA ဖြင့်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကိုရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ရပါမည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကိုအောက်ပါလျှောက်လွှာ link ကိုမှအသေးစိတ်နိုင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: သြဂုတ်လ 30, 2021 ။
5. 2021 ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအတွက်အက်ဆေးပညာသင်ဆု
တနည်းကား, ဒီဂျာမနီမှာအပြည့်အဝငွေကြေးထောက်ပံ့ပညာသင်ဆုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းပညာသင်ဆုသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကျောင်းသားအားဒေါ်လာ ၅၀၀ မှဒေါ်လာ ၁၅၀၀ အကြားရရှိရန်အခွင့်အရေးပေးထားသည်။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: အနည်းဆုံး $ 500 ။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူသည်အထက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်ရမည်။ ဒါ့အပြင်ဒါမှမဟုတ်ဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့ရကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအပါအဝင်ကောလိပ်များမှကျောင်းသားတစ် ဦး ။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 30 အောက်တိုဘာ, 2021 ။
၂။ Katoni ပညာသင်ဆု - ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်း
တနည်းကား, ဒီဂျာမနီမှာအပြည့်အဝငွေကြေးထောက်ပံ့ပညာသင်ဆုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ Katoni ကထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုနှစ်စဉ်ပညာရေး၊ အလုပ်သင်သို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းအလုပ်အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည့်လူတစ် ဦး (သို့) လူများအားပေးသည်။
ထို့အပြင်၎င်းကိုသုတေသီများအားပေးသည်။ နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျောင်းသားများ။ ယဉ်ကျေးမှုတွင်ဆက်သွယ်ရေး၊ ဘာသာစကား၊ ဖက်ရှင်၊ အနုပညာ၊ အစဉ်အလာစသည်တို့ပါဝင်သည်။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူသည်သုတေသီတစ်ယောက်ဖြစ်ရမည်။ ဒါ့အပြင်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများရှိကျောင်းသားဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ရမည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 1 မေလ, 2021 ။
(၃) Writing Contest Scholarship 7
ထို့ကြောင့်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေနှင့်သင်သည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုလက်ခံပြီးပညာသင်ဆုအက်ဆေးပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သုံးဆုရရှိသူရှိလိမ့်မည်။ ထိုအခါဆုရရှိသူသုံးယောက်ငွေသားဆုရပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်အကောင်းဆုံးစာတမ်းများကိုပညာသင်ဆုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ နှင့်လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ။ သို့သော်စာရေးသူကခွင့်ပြုချက်ပေးလျှင်ထိုအရာသည်။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူသည်ဘွဲ့ရသို့မဟုတ်ဘွဲ့ကြိုဖြစ်ရမည်။ ထို့အပြင်အသက်၊ လူမျိုး၊ ကျား၊ မအပေါ်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ သို့သော်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အောက်ဖော်ပြပါလျှောက်လွှာတွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 31 မေလ, 2021 ။
၄။ အကောင်းဆုံးလျှောက်ထားသူများအတွက်ပညာသင်ဆု - Kozminski တက္ကသိုလ်
ဤပညာသင်ဆုသည် Kozminski တက္ကသိုလ်၏ဘွဲ့ (သို့) မဟာပရိုဂရမ်များသို့လျှောက်ထားသူအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါ့အပြင်၎င်းသည် Kozminski တက္ကသိုလ်မှပညာသင်ဆုဖြစ်သည်။
တနည်းကား, ဂျာမနီမှာအပြည့်အဝငွေကြေးထောက်ပံ့ပညာသင်ဆုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤပညာသင်ဆုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ဖော်ပြပါလျှောက်လွှာလင့်ခ်သို့သွားပါ။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: စာသင်ချိန်ကျူရှင်၏ ၅၆% - ၇၅၀၀ PLN နှင့်ညီမျှသည်။
လိုအပ်ချက်: ဤအချက်အလက်အတွက်အောက်ပါ application link ကိုသွားပါ။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 15 ဇူလိုင်လ 2021 ။
၅။ မန်ချက်စတာအချိန်ပြည့် MBA ပညာသင်ဆု
နှစ်စဉ်ဤပညာသင်ဆုသည်အရည်အချင်းအရှိဆုံး MBA သင်တန်းသားများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အရည်အချင်းအရှိဆုံးလျှောက်ထားသူများအားမန်ချက်စတာ MBA အတွေ့အကြုံမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေနိုင်သည်။
နောက်တဖန် ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ ၎င်းသည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့ထားသောပညာသင်ဆုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤပညာသင်ဆုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ဖော်ပြပါလျှောက်လွှာလင့်ခ်သို့သွားပါ။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: £ 10,000 - £ 44,000
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူသည်ကောင်းမွန်သောပညာရေးဆိုင်ရာအထောက်အထားရှိရမည်။ ဒါ့အပြင်ကောင်းတစ် ဦး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် track record ရှိရမည်။ နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့ကျွမ်းကျင်မှု။ ဒါ့အပြင်ခိုင်မာသောတန်ဖိုးများနှင့်ကျင့်ဝတ်ရှိရမည်။ ထို့အပြင်ထူးချွန်သည့်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်စွန့် ဦး တီထွင်သူနှင့်ကျောင်း၏အနာဂတ်သံအမတ်ဖြစ်လာရန်အလားအလာရှိသည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 1 ဇွန်, 2021 ။
၆။ ဥရောပရှိထူးချွန်သောကျောင်းသားများအတွက် EUSP ပညာသင်ဆု
EUSP ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်သည်နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းကျောင်းသားများအတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ ထူးချွန်သောကျောင်းသားများအုပ်စုငယ်ကိုလိုအပ်သောအခြေခံပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
၎င်းသည် EUSP ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးဆိပ်ကမ်းပညာရေးကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ ဆုအများစုအတွက် EUSP သည်ပညာရေးအောင်မြင်မှုကိုသာစဉ်းစားသည်။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၁၀၀၀ မှယူရို ၁၅၀၀၀ အထိ။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူများသည်အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားဖြစ်ရမည်။ ထို့အပြင်ဥရောပ၌တစ်နိုင်ငံလုံးအသိအမှတ်ပြုပညာရေးဆိုင်ရာကျောင်း၌စာရင်းသွင်းရမည်။ ဒါ့အပြင်အနည်းဆုံးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာကောလိပ် GPA ရှိရမည် 3.0 ။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 30 နိုဝင်ဘာ, 2021 ။
အထက်ပါတို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်း၏ ပညာသင်ဆု ဂျာမနီမှာ။ ကောင်းစွာလျှောက်ထားပါ။ သို့သော်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီသတိပြုပါ။ သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဒါ့အပြင်သင်ကအလွန်လေးနက်သောအရည်အချင်းပြည့်မီမှုစံကိုယူအရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုမယ်ဆိုရင်အရည်အချင်းမပြည့်မီလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင်ဤကဲ့သို့သောနောက်ဆုံးသတင်းများအတွက်ဤဝဘ်ဆိုက်သို့အမြဲတမ်းအခမဲ့သွားပါ။ ကံကောင်းပါစေ
စျေးသက်သာသောခေါ်ဆိုခနှုန်းများအတွက် Airtel Smart Talk 2021 သို့ပြောင်းရွှေ့နည်း
NAMA ရွေးချယ်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း 2021/2022 PDF List ကိုစစ်ဆေးပါ
UNIPORT အခြေခံပညာကျောင်း၏ ၀ င်ခွင့်စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းနေ့များကိုဤတွင်ကြည့်ပါ - 2019/2020
Glo စုဆောင်းမှု 2020/2021 လျှောက်လွှာပုံစံ Portal ကို www.gloworld.com
အဘယ်သူမျှမအံ့သြစရာများဖြစ်ရပ်များဗိသုကာစုဆောင်းမှု 2020/2021 လျှောက်လွှာပုံစံ Portal ကို
Tony Elumelu ဖောင်ဒေးရှင်း TEF-UNDP Sahel လူငယ်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု
ADSU သင်တန်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များ ကမ်းလှမ်းသောသင်တန်းများအပြည့်အစုံ
« ကမ္ဘာ့ဘဏ်အလုပ်သင် 2021 လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးနေ့နှင့်တရားဝင်နောက်ဆုံးနေ့
17 အကောင်းဆုံးအပြည့်အဝငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသောအင်ဂျင်နီယာပညာသင်ဆု 2021/2022 Portal Updates »
Civil Defense ခေါ်ယူခြင်း www.nscdc.gov.ng 2021 Application Portal ကိုကြည့်ပါ